Uyini umehluko phakathi kweCAT5E neCAT6 ezakhiweni ezihlakaniphile - IConnexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Uyini umehluko phakathi kwe-CAT5E, CAT6kanye ne-CAT6A ekusebenzeni kwesistimu nakuzinhlelo zokusebenza zenethiwekhi?
1. Umkhawulokudonsa womzimba wensimbi we-CAT5E: 100MHz, CAT6 wiring bandwidth ngokomzimba: 250MHz;
Incazelo: Ukukhula komkhawulokudonsa ngokomzimba, kukhuphuka izinga lokudlulisa elisekelwayo.
2. Izintambo ze-CAT5E ngokuvamile zisebenzisa i-gauge ye-24AWG (cishe ububanzi be-copper core: 0.51mm), futhi izintambo ze-CAT6 ngokuvamile zisebenzisa i-23AWG wire gauge (ubukhulu be-copper core obungu-0.57mm);
Incazelo: Ukujiya kobubanzi besisekelo sethusi, kungcono ukusebenza kokuqhuba, nokuncipha kokuncipha kwesiginali kulayini. Kuzicelo ze-PoE, i-23AWG inenzuzo ephelele ngaphezu kwe-24AWG ekudlulisweni kwamandla.
3. Izinga eliphakeme lokudluliswa kwedatha elisekelwa yi-CAT5E wiring theory yi-1200Mbps, futhi isilinganiso esiphakeme sokudluliswa kwedatha esisekelwa yi-CAT6 wiring theory yi-2400Mbps;
Incazelo: Ukuphakama kwesilinganiso sokudluliswa kwedatha, kukhula umkhawulokudonsa womzimba.
4. Izinga lesicelo le-10GBASE-T 10G Ethernet elingasekelwa wiring ye-CAT5E, kanye ne-10GBASE-T Ethernet standard ejwayelekile i-CAT6 wiring engayisekela, kepha ibanga lokudlulisa lilinganiselwe futhi alikwazi ukudlula amamitha angama-37.
Incazelo: Isigaba 6 sokwenza ikhebula asikwazi ukuhlangabezana nezidingo zohlelo lokusebenza lwe-10 Gigabit Ethernet emabangeni amafushane, kuyilapho izinhlelo zesigaba 5 zingakwazi ukuyixhasa.
5. Izintambo ze-CAT6 zivamise ukwakheka kohlaka lwesiphambano ukunciphisa i-crosstalk phakathi kwamabili. Inkomba yayo yokusebenza (NEXT) eseduze nokuphela kwe-crosstalk yokusebenza ingu-5-10dB ephakeme kunaleyo ye-CAT5E ngaphandle kohlaka lohlaka (1-100MHz);
Incazelo: Ukunciphisa i-crosstalk phakathi kwamabili nguyona mfuneko ebaluleke kakhulu eyisisekelo yokudluliswa okuzinzile nokusheshisa kakhulu kwemininingwane yedatha ohlelweni lwezintambo.
Qhathanisa ngokuphelele umehluko phakathi kwalezi zinhlelo ezimbili ezibalulwe ngenhla zezinhlelo zokuxhuma izintambo, uhlelo lwe-wiring lweSigaba 6 alugcini nje ngokuba kude kakhulu kunesigaba 5 samakhebuli ngokusebenza ngokomzimba nangamandla kagesi, kepha futhi luphakeme kakhulu kunesistimu yezintambo zesigaba 5 imigomo yokudlulisa idatha ngesivinini esikhulu nokuzinzile. Ngasikhathi sinye, njengoba umkhakha wamakamelo wesigaba 6 uqhubeka nokukhula, ukukhushulwa okukhulu kwemikhiqizo yesigaba 6 kuqhuba ukukhiqizwa kwemikhiqizo emikhulu yesigaba 6, okwenza intengo yomkhiqizo wezintambo zesigaba 6 ungabe usaphakama kakhulu kunentengo ngezigaba ezingaphezu kwezingu-5.
Okulandelayo, nansi incazelo emfushane yomehluko ekusebenzeni komkhiqizo phakathi kwe-CAT6 ne-CAT6A system cabling:
1. Umkhawulokudonsa womzimba wensimbi we-CAT6: 250MHz, i-CAT6A wiring bandwidth ebonakalayo: 500MHz;
2. Ukumelana kwekhebula le-CAT6 (ngo-20â „ƒ) 155 ohm / km, inani le-NVP: 69%;
CAT6A ikhebula loop ukumelana (at 20 ° C) 150 ohm / km, inani le-NVP: 76%;
Incazelo: Okuncanyana ukumelana ne-core core loop, kungcono ukusebenza kokuqhuba, nokuncipha kokuncishiswa kwesiginali kulayini. Inani lekhebula le-NVP yipesenti yesilinganiso sokudluliswa kwesiginali kagesi endaweni yethusi elingana nejubane lokukhanya ekungeneni. Ukuphakama kwenani le-NVP, kuyashesha isivinini sokudlulisela isignali ye-elekthronikhi phakathi.
3. Izinga lesicelo se-10GBASE-T 10 Gigabit Ethernet elisekelwa yi-CAT6 cabling, kepha ibanga lokudlulisa lilinganiselwe, alidluli kumamitha ayi-37 (kanye nesidingo sokwengeza isivivinyo sangaphandle se-crosstalk sokuhlola kabusha ukusebenza kohlelo lwe-cabling lwesigaba 6 uma kuqhathaniswa ukuphazamiseka kwangaphandle kagesi). I-CAT6A cabling ingakwazi ukusekela i-10GBASE-T Ethernet application standard, ehlangabezana nohlelo olujwayelekile lwamamitha ayi-100 ngaphandle kokuhlolwa okwengeziwe kwe-crosstalk kwangaphandle.
Incazelo: Uhlelo lwe-CAT6A lokufaka ikhebula lungahlangabezana ngokugcwele nezidingo zohlelo lokusebenza lwe-10 Gigabit Ethernet ebangeni lamamitha ayi-100, futhi kukhona ukukhubazeka okuningi ekudlulisweni kwe-10 Gigabit Ethernet ngohlelo lwe-CAT6 cabling.
4. Ikhebula le-CAT6A livamise ukusebenzisa indlela ye-aluminium foil shielding kanye ne-aluminium foil total shielding ukufeza umphumela omuhle kakhulu wokuvikela ekuphazanyisweni kwangaphandle kwe-electromagnetic ne-crosstalk phakathi kwamabili. I-crosstalk phakathi kwezinhlobo eziyisithupha zamabhangqa asontekile angenasici esakhiwo sesakhiwo esiphambanweni ingu-15-35dB ephezulu ebangeni le- (1-250MHz).
Incazelo: Ukunciphisa i-crosstalk phakathi kwamabili nokugwema ukuphazanyiswa kwamandla kagesi wangaphandle kusuka ezintanjeni kuyisisekelo esibaluleke kunazo zonke sokudluliswa okuzinzile nokushesha kakhulu kolwazi lwedatha ohlelweni lwezintambo.
Uhlelo lokuhlanganisa izintambo lwakhiwe iminyaka engaphezu kwengu-20. Ngokwandiswa kwezicelo zenethiwekhi emikhakheni ehlukahlukene, inani lamachweba lenyuke kakhulu. Futhi ngokuthuthuka okuqhubekayo kobuchwepheshe bolwazi, abasebenzisi banezidingo eziphakeme neziphezulu zejubane lenethiwekhi. Ukuze kusekelwe ukwakhiwa kwejubane lenethiwekhi, uhlelo lwenethiwekhi lokufaka amakhebuli lwenwetshiwe kusuka ezinhlotsheni ezintathu zokuqala zezinhlelo kuye ekusekeleni kwanamuhla kokudluliswa kwe-Gigabit eyi-10. I-CAT6A (Ikati 6), inganikeza ngesilinganiso sokudluliswa esime phezulu sama-Gigabits ayi-10 ne-10Gbps. Ngakho-ke njengamanje, ukusebenza kokudluliswa kwekhebula lethusi akuseyona ibhodlela lesicelo.